Raging Turkey Dabka Dabka Kiciya Dalxiis Dalxiis oo ku yaal gobolka loo dalxiis tago ee Antalya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Turkiga » Raging Turkey Dabka Dabka Kiciya Dalxiis Dalxiis oo ku yaal gobolka loo dalxiis tago ee Antalya
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Wararka kala duwan
Dabka ka holcaya dalka Turkiga ayaa kicinaya daadgureynta dalxiis ee Bodrum iyo Marmaris
Gobolka Antalya iyo meelaha loo dalxiis tago ee xeebaha caanka ku ah waxaa halis ku haya dab aad u weyn oo halis gelinaya dadka soo booqda iyo dadka deggan meelaha loo dalxiis tago ee Koonfurta Turkiga.
Dabkii ugu xumaa ee ka dhaca Bodrum iyo Marmaris, Turkey
Daad gureyn ayaa laga dalbaday magaalooyinka loo dalxiis tago ee Bodrum iyo Marmaris ee Turkiga.
Dabka dabka ayaa aad ugu gubta guryaha iyo huteelada.
Ciidamada Badda ee Turkiga ayaa ka qeyb qaadanaya la dagaalanka dabka ka kacay dabka.
Dabkii ka kacay Turkiga ayaa ku dhuftay magaalooyinka loo tamashle tago ee Marmaris iyo Bodrum. Maamulka deegaanka ayaa amray in la daadgureeyo dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka.
Dabka ayaa markii hore ka soo ifbaxay gobol aad u dad yar oo qiyaastii 75 kiiloomitir (45 mayl) bari ka xigta Antalya, oo ah magaalo dalxiis oo caan ah gaar ahaan caan ku ah Ruushka iyo dalxiisayaasha kale ee bariga Yurub, laakiin sidoo kale Jarmal.
Laakiin waxay Khamiistii ku sii qulqulayeen xeebaha bacaadka leh oo ay ku yaalliin huteelada iyo meelaha lagu nasto.
Sawirro lagu baahiyay baraha bulshada iyo TV-ga Turkiga ayaa muujinayay dadka deegaanka oo ka boodaya baabuurtooda oo naftooda ku dhex ordaya waddooyin qiiq ka buuxo oo ay iftiiminayaan olol liin ah.
Sababtoo ah dabka xoogan, dadka waxaa markii ugu horeysay laga daad gureeyay Marmaris.
Kaymaha ayaa gubanaaya meel aad ugu dhaw guryaha iyo hoteelada.
Dalxiisayaasha qaar waxay kubbada ku ciyaaraan xeebta, iyadoon loo eegin dabka
Wasiirka Beeraha iyo Dhirta ee Turkiga Bekir Pakdemirli ayaa sheegay in shan diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah, hal diyaarad, iyo 30 dab damis ay la dagaallamayaan dabka masiibada ku haya aaggaas.
Dabka cusub ayaa lagu arkay magaalada loo tamashlaha tago ee Bodrum. Dadka ayaa la daad gureynayaa. Cutubyada Ciidanka Badda ee Turkiga waxay ku lug leeyihiin isku dayo quus ah oo lagu joogteeyo dabka.
Dab-damisyada hadda socda, kuwii ugu xoogga badnaa sanadihii la soo dhaafay, waxay bilaabeen kuleylka gobolka ka jira awgood. Ilaa hadda, afar qof ayaa ku dhintay musiibada halka 183 ay la kulmeen qiiq.
Goor sii horreysay, Wasiirka Dalxiiska Turkiga Mehmet Nuri Ersoy ayaa sheegay in dabku uu ka soo noqonayay hoteellada iyo guryaha.
Wasiirka ayaa yiri: “Maadaama faragalinta lagu fuliyay waqtigii loogu talagay isla markaana la adeegsaday qalab aad u tiro badan, waxaa laga hortagay in dabku ku faafo dhanka xeebta. Markii dambe, waxaa la xiray waddooyinka aada meelaha loo dalxiis tago. ”
Maanta, Bodrum waa mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee ganacsiga, farshaxanka, iyo madadaalada sida ay ahayd tan iyo qarniyo ka hor… iyada iyo iyada ku noolow.